Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Na-elele ndị njem njem nlegharị anya nke Africa na ndị otu nọ na mba 26
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Burundi • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cameroon • Akụkọ na -agbasa na Chad • Akụkọ Comoros • Akụkọ kacha ọhụrụ na Congo • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cote d'Ivoire • Akụkọ kacha ọhụrụ na Djibouti • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Eritrea Breaking News • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Ozi Gabon • Akuko Gambia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lesotho • LGBTQ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Liberia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Libya • Akụkọ okomoko • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mali • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • Akụkọ ọhụrụ Niger • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Akụkọ na -emegharị na Senegal • Akụkọ gbasara Seychelles • Akụkọ Sierra Leone • Akụkọ kacha ọhụrụ na Somalia • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Sudan • Akụkọ na -agbasa Sudan • Akụkọ Togo • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa bụ mmekorita ọha na eze na otu ozi siri ike. Ozi a bụ ịgwa ụwa na Africa Tourism na-aghọ otu ebe na-emeghe maka azụmahịa. Africa bu ala di nma ma nabata ndi njem nleta, itinye ego na mmekorita ya. Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya n'Africa na-anabata ndị isi njegharị site na gburugburu Africa na n'akụkụ ụwa niile aka iji weta onye ndu, ihe ọhụrụ na ohere itinye ego.
Ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya na-ahụ maka ịhe Afrika a ga - etolite ọnụ. Hapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'azụ na site na ịdọta ndị ndu njem nleta iji sonye na ikpo okwu ọhụrụ a iji kwụsị njedebe. Tourlọ Ọrụ Njem Nleta nke Africa bụ maka ịba ụba azụmahịa, itinye ego na mmata dị mma maka kọntinent echefuru echefu.
Dị ka otu n'ime ndị nkwado mbụ na onye otu ntọala, Otu iFREE dị na HongKong bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ na-asụ ụzọ ọhụrụ iji jikọọ na ụwa nke njem na nkwukọrịta ekwentị.
Site na oku mba ụwa na ihe ngagharị nke data na Wi-Fi na njikọta na njem ndị njem pụrụ iche, iFREE Group esetịpụla ihe mgbaru ọsọ iji gbochie ihe mgbochi ma mee ka ụwa bịarukwuo nso, ma n'Africa bụ n'ezie ihe ha chọrọ.
Emebere ohuru Ndị njem nlegharị anya nke Africa dabere na ntinye ohuru nke ndi Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP)
Mgbasa mgbasa ozi hụrụ Africa n'anya ma gosipụta. N'ime otu ọnwa onye nta akụkọ na akwụkwọ si n'akụkụ niile nke ụwa ghọrọ ndị enyi nke mgbasa ozi na-akwado African Tourism Board.
Ndi otu ndi njem nlere anya nke ndi Afrika mere ka odi onwa di mkpirikpi ma buru ndi choro ka ha guzobe ya. Mkparịta ụka na-arụ ọrụ na-apụta. Naanị taa ndị njem njem nleta n'Africa anabatala ndị otu ọhụrụ 100 na ọtụtụ ndị ọzọ na-achọsi ike ịbụ ndị ọsụ ụzọ na njem a maka Africa, site n'Africa site na nkwado ụwa.
Na mmekorita ya na ndi otu na ndi ulo oru ndi mmadu, ndi njem nlere anya nke Africa (ATB) na-eme ka onu ogugu, uru, na ogo nke njem na njem site na-n'ime Africa.
Ndị otu a na-enye ndị ndu na ndụmọdụ n’otu n'otu na mkpokọta ndị otu otu ya.
Thetù a na-agbasawanye na ohere maka ịzụ ahịa, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, ịmepụta, ịkwalite na ịtọ ntọala ahịa.
Omume ugbu a:
The ATB njem nleta na nchekwa ahụiket na Sierra Leone ma mee atụmatụ maka mba atọ ọzọ.
PR & Ahịa, Mgbasa mgbasa ozi
Trade show òkè
USA Road na-egosi
A debara aha ndị otu na mba ndị a:
Congo (Rep nke)
ATB nọ na usoro iji kpọsaa ọkwa mbụ nke ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya n'Africa ma na-arụkwa ọrụ a iji jikọta ọrụ ndị ọzọ na-eme njem site na ndị ọzọ na-eme njem nlegharị anya Africa.
Searchchọta onye isi amalitela ma kpọọ aha ndị njem nlegharị anya na-aza.
Nzukọ ahụ abịaworị ụzọ dị anya ọkwa izizi bipụtara eTurboNews na April 6, 2018.
Achọbeghị ndị guzobere ndị njem na njem nleta n'Africa.
Banye ATB dị mfe. Naanị ileta www.africantourismboard.com wee pịa sonyere anyi dika member.